Anyị na-atụnyere wijetị nke ngwa ndepụta kachasị mma | Gam akporosis
Enwere ọtụtụ ngwa iji detuo ma n’etiti ha enwere ngwa 4 nke ndepụta ịme ihe na ha ga-enye anyị ohere ịhazi ihe niile nke ọma yana na anyị agaghị echefu ihe ọ bụla. Anyị ga-elekwasị anya na wijetị n'ihi mkpa ọ dị ha na ngwa iji dee ihe iji nweta ndepụta site n'otu desktọọpụ nke ekwentị anyị.
Ọ bụrụ na edepụtara m ndepụta a, ọ bụ m chọrọ ịchọta nke na-emezu atụmanya m inwe ọbụna wijetị nke oge a nke ị nwere ike ịnweta na ndepụta ahụ nke onwe m, ihe nkiri ndị m ga-ele, ma ọ bụ nanị ihe ndị dị mkpa m na-achọghị ịhapụ. Ka anyị doo anya, ngwa ndepụta ndepụta na-enweghị nnukwu wijetị bụ ụdị ịgbapụ ụkwụ. Gaa maka ya.
1 Tinye akà rà
2 Ihe aga-eme Google
4 Ihe Microsoft ga-eme
5 Anyị na-anọrọ na TickTick
Tinye akà rà
Nke a bụ a ngwa-ime ndepụta ngwa na-ekpuchi akụkụ nke atụmatụ Ana m achọ: na ọ nwere wijetị nwere isiokwu agba yana ọ gụnyere ihe ncheta maka ndetu (nke a bụ etu ọkwa si apụta na ọkwa ọkwa ma m ghọtara ya). Akụkụ ikpeazụ a adịghị na niile dị ka Todoist ebe ọ bụ ego.
The handicap nke TickTick bụ na nkuzi adịghị na Spanish, ọ bụ ezie na mgbe ahụ a na-asụgharị ọtụtụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ mgbe anyị na-ekwu maka wijetị na ndị ọzọ.
Ewezuga ịkọwapụta na TickTick nwere isiokwu maka wijetị (Achọrọ m itinye agba wijetị na edo edo ka ọ dị iche na anya ma ọ bụghị otu n'ime ndị m nwere na desktọọpụ) na ncheta maka ndetu, ahụmịhe nke ịmepụta ihe ederede na-agbakwunye ọtụtụ ọnụ ọgụgụ, site na inwe ike iji mmegharị aka ekpe site na ndetu mee iji tọọ ihe ncheta, ma ọ bụ ike ya tinye faịlụ ma ọ bụ ọbụna vidiyo YouTube. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ nwere ike bụrụ naanị ngwa maka ndepụta ịme ihe. Ọzọkwa na-egbu bụ ọnụ ọgụgụ nke wijetị ịgbakwunye na- 10.
Dị ka ugbu a, m na-achọ ngwa iji depụta ihe m ga-eji nnukwu wijetị na nke nwere ihe ncheta (m ga-ahọrọ Todoist ma ọ bụrụ na enwere m ihe ncheta n'efu), Tinye akà rà, na ihe ijuanya m ọ ga-enwe ike dochie ya. O nwedịrị aha mmado ma ọ bụ ikike ibute ihe edeturu. Niile nhọrọ ịkepụta wijetị na-agbakwunye ọtụtụ ọnụ ọgụgụ na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkacha mmasị na nke m ga-eji.
Wijetị nwere agba dị iche iche ma nwee ike ahaziri ya nke ọma
Ihe ncheta, gbakwunye faịlụ, agbakwunyere njikọ vidiyo na mkpado na ndetu n'efu
Dị ndenye aha na nhọrọ dị elu
Nkuzi adighi na Spanish
Ihe aga-eme Google
Ngwa ntinye nke Google nwere ihe di nma nke mekọrịta ndepụta ndị ọzọ ị meburu site na katalọgụ nke ngwa gị; ewezuga ihe emelitere ya ọnwa ole na ole gara aga site na isiokwu gbara ọchịchịrị. N'ezie, mgbe m jiri akaụntụ Google isi, ọ malitere ịmekọrịta ndị niile m nwere na mbụ. Cheta na otu n'ime nhọrọ kacha mma onye enyemaka Google nwere bụ ndepụta ụlọ ahịa. Yabụ ọrụ a adịlarị mma na ihu ọma ya.
Mepee Google Task, eziokwu nke Google mere a nnukwu imewe ọrụ na otu bọtịnụ na ala nke na-akpọ anyị òkù ka anyị mepụta ọrụ mbụ anyị. Anyị kere ya ma chọpụta na ọ nwere nhọrọ ole na ole karịa TickTock. Naanị na ọ na - enye gị ohere imepụta ihe aga - eme, ọ bụ ezie na ọ na - enye itinye ihe ncheta. Otu nkọwa, tinye obere ihe ederede n'okpuru ya.
Emepụtara ọtụtụ ihe edetu anyị na-aga wijetị iji hụ otu ọ dị. Nke mbu, adịghị ekwe ka ị hazie ya n'ụzọ ọ bụla. Odori na desktọọpụ, ọ na-enye nhọrọ ka ịgbanwee n'etiti ndepụta dị iche iche, mana nke ahụ bụ ihe ahụ na-enweghị ike ịmepụta ihe ọhụụ edeturu site na bọtịnụ +. Ee, ọ masịrị m na mgbe ịpịrị ohere ọ bụla, ị ga-aga windo okike edeturu, mana ebe ahụ ka ihe niile dị.
Ọ bụrụ na anyị gaa na nhazi nke isiokwu ahụ, site na ngwa ngwa mepee ọ na-enye ohere ịgbanwe n'etiti ọkụ, ọchịchịrị na ndabere isiokwu. Obere ihe maka ngwa nke edepụtara ihe niile na - egbochi nhọrọ. N'ụzọ ezi uche dị na ya n'ihi na ndị chọrọ onye na-mekọrịta n'etiti ha Google akaụntụ na adịghị mkpa ọtụtụ. Ezigbo mma na imewe, ee.
Mmekọrịta na ndepụta ndị ọzọ ị nwere na akaụntụ Google gị
Na-enye gị ohere itinye ncheta na ndetu
Wijetị enweghị ike ịhazi ya: naanị ọchịchịrị ma ọ bụ isiokwu ọkụ
Enweghị ike ịgbakwunye faịlụ ma ọ bụ tinye ọrụ
Anọ m na-eji Todoist ruo ọtụtụ afọ na eziokwu bụ na m jisiri ike nweta ọtụtụ ihe na ya na wijetị na ndị anatara-eme ha mere ya ngwa kachasị mma n'ụdị ya ogologo oge. Mana enweela ndị asọmpi na-ewepụ ndị ọrụ dịka onye na-ede usoro ndị a n'onwe ya.
Todoist nwere ike gosipụta oke atụmatụ na ahụmịhe dị ukwuu, mana nke a bụ ọdịiche dị n'etiti nhọrọ ya n'efu na ndenye aha kwa ọnwa nke 4 euro. Ọ bụrụ na ị na-akwụ ụgwọ kwa ọnwa ị nwere ihe ncheta, mkpado na ndetu, ihe na faịlụ, mana ọ bụrụ na anyị achọ nke a na ngwa ọzọ anaghị akwụ ụgwọ anyị nwere TickTick nke na-enye otu maka euro efu. Nke a bụ ebe Todoist na-efunahụ agbụrụ ahụ, ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọ na-enyekwu nhọrọ na ndenye aha ya dị ka ngosipụta ọganihu kwa izu.
Ese a na-ekpebi ọganihu a na-enwe kwa izu site na ịmecha ọrụ na otu o si enyocha ọganihu gị. Ọ na-enyekwa isiokwu adịchaghị agba iji gosipụta wijetị, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịga site na uhie nke ọ na-enye site na ndabara, ị ga-enwe ndenye ọpụpụ.
Dị ka anyị dị anyị na-achọ a wijetị na-enye anyị ohere ịmepụta listi ịme-eme Site na isiokwu agba na ihe ncheta ndị ahụ, yana ike itinye akwụkwọ, Todoist na-ahapụ ịhapụ ịhapụ ya arụnyere na TickTick ga-anọchi ya. Ma nke Microsoft na-abịa na-esote.
Ihe zuru oke na nyocha kwa izu nke arụzuru ọrụ
Ngwaọrụ dị ukwuu yana ihe ndị kalenda na iwu iji rụọ ọrụ
Usoro ndenye aha gụnyere gụnyere ncheta, mkpado, ihe kacha mkpa ma gbakwunye faịlụ na wijetị
Ihe Microsoft ga-eme
Inweta ọrụ site na Wunderlist, a nnukwu ngwa nke ụlọ ọrụ weghaara site na Bill Gates (na ọbụna na-enye gị ohere ịbubata ihe ndetu gị niile), na ịmara na Microsoft na-echepụta ezigbo ngwa na ngwanrọ, Ime bụ ezigbo ngwa maka ndepụta ịme, mana nke ahụ Freck nke enweghi ahaziri aha ya. Karịsịa na wijetị ahụ na-eju anya na anyị nwere ike "agba" ma ọ bụ oji ma ọ bụ ọcha. Yabụ, ọ bụrụ na anyị tinye ya na desktọọpụ ọ gaghị apụta n'ụzọ ọ bụla ma ọ bụrụ na anyị tinye ya na wijetị ndị ọzọ.
Dịka wijetị Google Task, ọ na-egbochi ịhazi ya ma ha arụpụtaghị ọrụ iji mepụta windo obere iji mepụta ihe edeturu. Ọ na-ewe gị ozugbo na ndepụta ahụ, nke ahụ bụ site na ngwa ahụ -enye gị ohere itinye a ndabere dị ka ihe oyiyi ma ọ bụ hazie ya na ọtụtụ ụdị agba. Ma nke a customization adịghị na wijetị gị, ya mere, anyị na-anọgide na-arapara na TickTick n'ihi nke a.
Eeh, ime nwere ihe nile ichoro ọrụ, kọwaa ụbọchị ruru, ihe ncheta ma ọ bụ ọbụna nhọrọ ịmegharị; Akụkụ ikpeazụ a na-enye anyị ohere itinye usoro kwa ụbọchị iji chekwaa ike na oge.
Na imewe ọ na-enwetakwa ọtụtụ na ihe gbasara mmelite nke otu. N'ezie nke ahụ mgbe anyị laghachikwutere ya n’ime otu afọ ọ ga - edozi nsogbu ndị ahụ niile ọ ga-abụ nke kachasị mma, mana ugbu a, ebe ọ bụ na ebuputara ya na nso nso a, ọ ka nwere ihe iji meziwanye.
Ọ dịwo na ikpeazụ update na nke smart anatara na-ike ma nke ahụ nyere anyị ohere ịhazi aha ndepụta niile ga-eme. Mana ihe ekwuru, na akụkụ dị mkpa dị ka wijetị na ndepụta ịme ihe, nhazi ahụ abaghị uru ma ọ dị n'azụ TickTick.
Zuru oke na enweghị ụgwọ ọ bụla
Gụnyere kalenda, ncheta, gbakwunye faịlụ na ndetu na ndetu ahụ
Isiokwu na-na-ngwa ndetu
Wijetị bụ bland - naanị ìhè na ọchịchịrị isiokwu
Anyị na-anọrọ na TickTick
N'ikpeazụ, anyị na-ekpe na TickTick, nnọọ a na anya, na na ọ ga-enwe ike dochie Iji-eme na gị customization nhọrọ, na Todoist maka ịhapụ ya iji ihe ncheta n'efu ma ọ bụ tinye faịlụ na ndetu. Ọrụ Google dịtụ ntakịrị na ọ ga - adị mfe, ọ bụ ezie na ọ naghị enwe nnukwu atụmatụ.
Ka anyị doo anya, ọ bụrụ na ị jiri ngwa ndepụta, wijetị dị mkpa iji kaa ọrụ ndị emere na-enweghị imeghe ngwa ahụ, yabụ ọ bụ otu akụkụ dị mkpa na ọ bụ ya mere o ji bụrụ mkpebi dị mkpa n'etiti a na onye ozo. Anyị na-akpatre hapụrụ na TickTick n'ihi ịbụ onye zuru oke na ọkwa niile: nnukwu imewe, wijetị agba, ihe ncheta, gbakwunye faịlụ na ndetu na n'efu.
Nke a bụ otu anyị si akwụsị nke a ihu na ihu nke wijetị nke ngwa kachasị mma nke 4 maka listi ịme ihe Kedu nke kachasị amasị gị dabere na ahụmịhe gị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Anyị na-etinye wijetị nke 4 kacha mma ndepụta ngwa ngwa ihu na ihu
Samsung na-emezi ekwentị ya n'efu na ndị ọrụ ọhaneze niile megide COVID-19 na United States